संभोगका यि यी दर्जन रोचक तरिका, कसरी र कुन दिन गरेको सेक्स र बसेको गर्भबाट कस्तो बच्चा जन्मन्छ जान्नुहोस् « OsNepal News
संभोगका यि यी दर्जन रोचक तरिका, कसरी र कुन दिन गरेको सेक्स र बसेको गर्भबाट कस्तो बच्चा जन्मन्छ जान्नुहोस्
काठमाडौं । प्राचीन कालमा सेक्स अर्थात सम्भोग सन्तान जन्माउने उद्देश्यले गरिन्थ्यो । तर, हिलोआज यसमा मात्रै सिमित छैन । निमयसंगत सहवास गरेमा संस्कारी हुने तथा विभिन्न बाधाव्यवधानहरूबाट मुक्त रहने विश्वास गरिन्छ । प्राचीन कालमा सन्तान जन्माउन गरिने सम्भोग विधिपूर्वक हुन्थे । त्यत्तिखेर शुभ दिन एवं मुहूर्त हेरेर विधिपूर्वक सम्भोग गरी योग्य सन्तान जन्माउने प्रयास गरिन्थ्यो ।
तर, अहिलले कन्डोमको जमानामा सम्भोग सन्तानप्राप्तिको उद्देश्यले मात्र गरिँदैन, अनुशासन पालना गरिँदैन, केवल क्षणिक दैहिक सुखको मात्र ध्यान राखिन्छ । सम्भोग प्रेममय हुनुपर्छ ताकि कामवासनाले युक्त हुनुहुँदैन । यसले पति पत्नीमा दरार ल्याउने गर्छ । अहिले यस कुरामा खासै कसैको ध्यान जाँदैन । सहवासको प्राचीन नियम भने यस्तो छ , जसको पालना गर्दा फाइदा पुग्ने विश्वास गरिन्छ :
३. सम्भोगका लागि केही शास्त्रीय नियम छ । जसमा कुनै दिन सम्भोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसमा औंसी, पूर्णिमा, चतुर्थी र अष्टमी तिथि, आइतवार, मंगलवार, संक्रान्ति, पितृ पक्ष, नवरात्रि, साउन महिना तथा महिनावारीका समयमा सम्भोग वर्जित छ । यो नियमको पालन गर्नाले घरमा सुखसमृद्धि, शान्ति एवं आपसी प्रेम बनिरहन्छ भने पालन नगर्दा गृहकलह, धनहानि एवं आकस्मिक दुर्घघनाको डर बनिरहन्छ । ओएसनेपालले विभिन्न चिकित्सकहरु र ज्योतीषिसँग कुराकानी गरेर यो समाग्री तयार गरेको हो ।
८. वर, पीपल, शमी आदि रुखका मुनि तथा सार्वजनिकस्थलमा यौनसम्पर्क राख्न वर्जित छ । कसैले यस्तो कार्य गरेमा अवश्य पनि उसले नकारात्मक परिणाम भोग्नैपर्ने हुन्छ । ओएसनेपालले विभिन्न चिकित्सकहरु र ज्योतीषिसँग कुराकानी गरेर यो समाग्री तयार गरेको हो ।
११. सुन्दर, दीर्घायु एवं स्वस्थ सन्तानको चाहना हुनेले गण्डान्त, ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिन, भद्रा, पर्वकाल, औंसी, श्राद्धको दिन, गण्ड तिथि एवं नक्षत्र तथा आठौँ चन्द्रमा छोडेर शुभ मुहूर्तमा सम्भोग गर्नुपर्छ । गर्भधानका समयको गोचरमा श्रीमान् श्रीमतीको केन्द्र एवं त्रिकोणमा शुभ ग्रह, तेस्रो, छैटौं र एघारौं घरमा पापग्रह, लग्नमा मंगल, गुरु आदि शुभ ग्रहको दृष्टि एवं महिनावारीबाट समरात्रि भयो भने अवश्य पनि पुत्रप्राप्ति हुन्छ । ओएसनेपालले विभिन्न चिकित्सकहरु र ज्योतीषिसँग कुराकानी गरेर यो समाग्री तयार गरेको हो ।
काठमाडौं । छोरीको विवाह समयमा नभएपछि थाइल्याण्डका एक बाबुले आफ्नी २६ वर्षकी छोरीको विवाह गराई